तीनकुने पार्कको कन्तबिजोगः मोदीका लागि सवा करोड खर्चने मेयरज्यू कहिले बन्छ डेढ करोडको पार्क ?
त्यसै तुहिए ‘सुन्दर बँगैचा’ बनाउने योजना
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्याशुन्दर शाक्यले कार्यभार समालेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि विकासे कामको एउटा सिन्को पनि भाच्न सकेका छैनन् ।
सय दिने कार्ययोजना समेत अगाडी ल्याएका मेयर शाक्यले काठमाडौँको स्वरुप नै बदल्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
उनका ती कार्ययोजना कागज र भाषणमै सिमित भएको स्थानीयबासीको आरोप लागिनै रहेको छ ।
छोटो समयमै मुहार फेरिएको राजधानी हर्ने आशाले स्थानीयबासीले जिताएका मेयर शाक्य अहिले ‘गुमनाम’ नै भएर बसेका छन् ।
‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भनेझैँ मेयर शाक्यले पनि जनताका सबै आशा निराशामै परिणत गरेर छाडे । न त सडकका खाल्डाखुल्डी नै पुरिए, नत कुनै विकासका आयोजनाहरु नै बने ।
उनकै कार्यपत्रमै तत्काल बनाइने भनिएको ‘तिनकुने पार्क’को पनि अझै कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ‘तीनुकने पार्क’सँगै यसलाई ‘आधुनिक बगैंचा’, ‘तीनकुने शान्ति मण्डला’ अनेक नाम दिइएको छ ।
नाम त दिइयो तर यो एउटा यस्तो पार्क, बगैंचा र मण्डला बन्यो जहाँ न एउटा फूल भट्टाउन सकन्छि न ठूलो रूख नै ।
अहिलेसम्म तीनकुनेलाई लिएर धेरै योजना बने तर एउटै पनि कार्यान्वयन भएन ।
बितेको तीन वर्षमा तीनकुनेमा पार्क, बगैंचा र मण्डला बनाउने नाममा करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
डेढ करोड रुपियाँले तीनकुनेमा के बन्यो ? अहिले देखाउन मिल्ने कुरा भने केही पनि छैन । प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपियाँ निल्ने, तर त्यो रकम कहाँ जान्छ के हुन्छ केही देखिदैँन ।
दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय नेरेन्द्र मोदीको स्वागतको लागि सवा करोड खर्च गर्नसक्ने मेयर शाक्यले डेढ करोडको पार्कबारे भने कुनै ठोस निर्णय गर्ननसक्नु अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ ।
दुई दर्जन बढी उपसमिति बनाएर मोदी स्वागतमा लागिरहेको मेयर शाक्यलाई स्थानीयबासीबीच सार्वजनिक गरेका सय दिने कार्ययोजनाबारे भने कुनै चासो नै नरहेको देखिन्छ ।
सुन्दै अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने नेपालमा सन् २०१४ को अन्तमा काठमाडौंमा ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन’ (सार्क)को १८औं शिखर सम्मेलन हुँदा त्यस पार्कलाई जस्तापाताले बार लगाएर समेत छोपियो ।
त्यस सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने नेपालबाहेकका सात राष्ट्रका राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले तीनकुनेभित्रको कन्तबिजोग नदेखून् भनेरै जस्तापाताले बारिएको थियो ।
बारका रूपमा प्रयोग गरिएका १४ लाख ९० हजार रुपियाँका ती जस्तापाता अहिले तीनकुनेमा एउटा पनि भेटिँदैनन् ।
केही थान जस्तापाता काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएर राखेको छ भने बाँकी कसले कहाँ लग्यो कसैलाई पत्तो छैन ।
रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिका तीनकुनेका जस्तापाता कहाँ गए भन्नेबारे बेखबर छ । महानगरले भने खाली जग्गा, सुरक्षा पनि भएन र हेरचाह गर्ने पनि नभएको बताएको छ ।
‘अस्थायी रुपमै भए पनि केही गरौं भन्ने सोचाइले तीनकुनेमा बेलाबेलामा काम भएको छ,’ तीनकुनेलाई सुन्दर बनाउने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘कहिले विदेशी आँउदा छेक्न पर्यो भनेर जस्ताको बार लगाइयो, कहिले मण्डला बनाउने योजना बन्यो, तर विभिन्न कारणले सबै काम रोकिए । अब तीनकुनेलाई राम्रो पार्कको रुपमा विकास गर्न स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।’
२०१४ नेभेम्बर २६ र २७ गते सम्पन्न त्यस सार्क सम्मेलनअघि पनि तीनकुनेमा बगैंचा बनाउने कुरा उठेर नै पार्क बनाउन सरकारले एक करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । तर पार्क चाहीँ बनेन ।
सार्क नजिकिएका कारण पार्क बनाउन नभ्याइने भन्दै महानगरपालिकाले अन्तमा तीनकुनेलाई जस्तापाताले बार्ने काम गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले जस्ताले बार्दा एक करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
अर्थले हिसाब पत्याउन नसकिने खालको भएको भन्दै रकम निकासा नगरेपछि महानगरपालिकाको १४ लाख ९० हजार लागेको भनेर खर्च दाबी घटाएको थियो ।
अर्थले पछि १४ लाख ९० हजार रुपियाँ निकासा गरिदिएको थियो ।
तीनकुने पार्क बनाउने योजना कहिलेदेखि ?
तीनकुनेलाई आधुनिक तथा आकर्षक बगैँचा बनाउने योजना धेरै पहिलाबाट सुरु भएको हो ।
सन् २००२ जनावरी ४ देखि ६ सम्म काठमाडौंमा सार्क को ११औं शिखर सम्मेलन हुँदा पनि तीनकुनेमा रातारात पार्क नबनाइएको होइन ।
दुई चारवटा रुख, सानो पोखरी, हरियो दुबो तीनकुनेमा रातारात उम्रिएका थिए ।
त्यतिबेला कति खर्चमा त्यो तामझाम गरिएको थियो हिसाब महानगरपालिकासँग छैन । तर, त्यो तामझाम लामो समय टिक्न भने सकेन ।
शिखर सम्मेलन सकियो, पार्कको आयु पनि सकियो ।
चौधरी ग्रपले पनि खर्चेको थियो रकम !
सार्क सम्मेलनकै अवसरमा तीनकुनैसँगै रहेको सिनामंगल जाने बाटोतर्फ) ‘आइल्यान्ड’ को सजावट र घडी राख्न चौधरी ग्रुपले २० लाख रुपियाँ खर्चेको थियो ।
चौधरी ग्रुपले बनाएको घडीले अहिलसम्म सही समय दिँदै आएको छ । यो आइल्यान्ड केही हेर्न लायक छ ।
चौधरी ग्रुपले पाँच वर्षसम्मका एक एजेन्टमार्फत यो आइल्यान्ड सजाउने जिम्मा पाएको हो । उसले सीधै महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको होइन ।
आइल्यान्डको मर्मतसम्भारका लागि चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष साढे २ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यहाँ चौधरी ग्रुपले हालसम्म साढे २७ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
अब बाँकी दुई बर्षमा उसले थप ५ लाख रुपियाँ खर्चिनेछ ।
महानगरपालिकाका एक अधिकारीकाले भने ‘महानगरपालिकाले तीनकुनेमा जे गर्न लागे पनि कुनै न कुनै समस्या आइहाल्छ । योजना बन्छन्, कार्यान्वयन गर्न लाग्दा तीनकुनेको मुअब्जाको कुरा उठ्छ । स्थानीयको विरोध हुन्छ । काम रोकिन्छ |’
जस्ता सार्नै ८६ हजार
खर्च १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनपछि तीनकुने थपा सज्जिने अवसर पायो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्दा ।
सन् १०१६ नोभेम्बर पहिलो साता मुखर्जी नेपाल आउँदा पुनः तीनकुनेलाई पार्क बनाउने कुरा उठेको थियो ।
सरकारले निर्णय गर्यो । तर बनेन, कारण पुरानै– समय अपुग भयो ।
मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने मितिसम्म सार्क सम्मेलनका बेला राखिएका केही जस्तापाता हराइसकेका थिए । बचेका जस्तापातालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट तीनकुने हुँदै बानेश्वरतर्फ जाने सडकमा सार्ने काम भयो ।
जस्ता सार्न ८६ हजार रुपियाँ खर्च भयो ।
यसैबीचमा महानगरपालिकाले तीनकुनेलाई ‘आधुनिक र सुन्दर बगैंचा’ बनाउने योजना ल्यायो । हरियो दुबो, रुख, सयौँ पूmलहरु रोपी तीनकुनेलाई आर्कषक बगैंचा बनाउने सोच महानगरको थियो ।
यसका लागि ५ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरियो ।
बगैंचामा नेपाल झल्काउने स्मारक, भूमिगत पार्किङ लगायतका सुविधा समेटिएका थिए । तर यो योजना पनि त्यसै तुहियो ।
फेरि अर्को योजना ‘शान्ति मण्डलाको’
महानगरपालिकाले पछिल्लो समय तीनकुनेलाई ‘शान्ति मण्डला’ बनाउने योजना बनाएको थियो । उक्त योजनाको डिजाइनसमेत तयार पारियो ।
डिजाइन तयार पार्न महानगरपालिकाले डेढ लाख रुपियाँ खर्चेको थियो । विस्तृत अध्ययन गरी एक अर्ब २३ करोड रुपियाँ लाग्ने योजना बनाइएको थियो भने योजना पनि भव्य थियो ।
जसअन्तर्गत मण्डलाको बीचमा विशाल (१६ मिटर उचाइ) बुद्ध मूर्ति, बीच भागमा १ सय ८ मिटर लामो र ५४ फिट अग्लो डोम ।
तीनतले डोमको पहिलो तलामा पार्किङ (३ सय कार र २ सय ५० मोटरसाइकल), दोस्रो तलामा क्युरेटर सप र तेस्रो तलामा मेडिटेसन हल निर्माण ।
तीनकुनका तीनवटै कुनामा रंगीन पानीको फोहोरा राख्ने डिजाइन तयार भएको थियो । यो याजना जनप्रतिनिधि आएपछि प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन्, महानगरका एक अधिकारी ।
‘तीनकुनेको सौन्दर्य’ भन्दै १ करोड
महानगरपालिकाले २०७४/०७५ आर्थिक वर्षमा तीनकुनेको ‘सौन्दर्य’ का लागि भन्दै १ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।
बजेट एक करोडको भए पनि तीनकुनेको सौन्दर्यका लागि ८९ लाख ४१ हजार ४ सय ९१ रुपियाँको कार्यक्रम बनाइएको छ । सो रकममध्ये ४७ लाख ७७ हजार ९ सय ८० रुपियाँ भने खर्च भइसकेको छ ।
यो रकम खन्ने, सम्याउने, ढल बनाउने, टायल बिछ्याउने जस्ता काम सकिएको भन्दै दुई चरणमा गरी महानगरपालिकाले उक्त रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको हो ।
‘आर्कषक पार्क’ बनाउने बहाना मात्रै भएको हुँदा तीनकुनेको स्वरुपमा कत्ति पनि फरकपन पाउन सकिएको छैन ।
लामोसमयदेखि तीनकुने पार्कको यस्तो कन्तबिजोग भइरहेको अवस्थामा मोदीका लागि सवा करोड खर्चने मेयरज्यू कहिले बन्छ डेढ करोडको तीनकुने पार्क ? मेयर शाक्यलाई आम महानगरबासीको प्रश्न हो यो ।